Shina 4 oz 100 ml Fandrindrana tavoahangy makarakara fitaratra miaraka amin'ny orinasa Lid sy mpamatsy | Hoyer
Drafitra fehin-kibo malaza mba hialana amin'ny flip, mora mitazona, rindrina matevina dia mampaharitra sy maharitra, sarotra ny manapaka, azonao atao koa ny misafidy ny hahazo tag vitsivitsy sy tady raha te-hampiavaka azy kokoa.
Volume: 100ml / 4 oz
Haavo: 55mm / 2.16 santimetatra
vozony: 50mm / 1,97 santimetatra
Famolavolana: Famolavolana kofehy malaza mba hialana amin'ny flip, mora mitazona, rindrina matevina dia mahatanty ary maharitra, sarotra tapaka, azonao atao koa ny misafidy ahazoana tariby sy tady raha te-hanavaka azy io.
Kalitao: Ny vera dia vita amin'ny menaka soda-lime, LEAD-FREE, tsy misy poizina, ary ny cap plastika dia BPA-FREE, samy manana ny sakafo avokoa izy ireo. Ny satroka dia 100% mifanentana amin'ny tavoahangy, koa ny sakafonao dia azo fehezina amin'ny 100% tsy misy lanja ary tsy misy azo leoka. Amin'ity seta ity, rehefa mametraka ny sakafo ao anaty vata fampangatsiahana ianao dia afaka mitahiry azy mandritra ny fotoana maharitra.
Fampiasana: Safidy tsara ny mitahiry puding, mango, jam, ronono, tantely, sakafo an-jaza, voanio, mofomamy, tsaramaso, hery sy ny sisa, ary azonao atao koa ny manisy azy io amin'ny alàlan'ny marika sy tady, fanomezana mahafinaritra ho an'ny fety, mariazy na mitsidika, toerana be dia be azonao ampiasaina azy io.
Sariaka eco: azo averina sy averina indray ity sefo ity, aorian'ny fampiasana ireo zavatra ao anatiny, manadio fotsiny, avy eo dia afaka manohy mampiasa azy ho an'ny sakafo hafa ianao, tena mety. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana maharitra, tena lafo vidy.
Size Boky: 100ml Haavo: 55mmDiameter: 55mm Neck: 50mm Boky: 4 oz Haavo: 2.16 santimetatraDiameter: 2,16 santimetatra ny tenda: 1,97 santimetatra
Previous: 2 oz Round Amber Kosmetika Jar
Manaraka: 7 oz 200ml Filazana boribory vita amin'ny vera Jar Jar Jarurt miaraka amin'i Lid
tavoahangy vera miaraka amin'ny sarony